Baolina kitra - CAN 2021 :: Isehoana tranga maromaro ny lalaon’i Barea sy Côte d’Ivoire • AoRaha
Baolina kitra – CAN 2021 Isehoana tranga maromaro ny lalaon’i Barea sy Côte d’Ivoire
Samy miahiahy ny mety tsy hahatomombana tsara ny fihaonana i Madagasikara sy Côte d’Ivoire, amin’ny lalao mandroso sy miverina hikatsahana tapakilan’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika amin’ny 12 sy 17 novambra ho avy izao. Mpilalao maromaro ho an’ny an-daniny sy an-kilany no tombanana tsy ho avy hiatrika an’ireo fifanandrinana indroa miantoana ireo, araka ny vaovao eny amin’ny tambajotran-tserasera.
“Betsaka loatra ireo mpilalao tsy afaka noho ny valanaretina sy tsy fahazoana taratasy fahazoan-dalana. Isaorana sahady ny fitondram-panjakana amin’ny fikaroham-bahaolana ataon’izy ireo hiatrehana an’ ity lalao ity”, hoy i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy, efa tonga tamin’ny alahady lasa teo any Abidjan niaraka tamin’ireo mpiandry tsatokazo roa (Nina Razakanirina sy Melvin Adrien) sy ny delegasiona malagasy. I
san’ireo efa tsy ho avy any Abidjan sady tombanana ho mbola tsy afaka hankaty Madagasikara Andrianantenaina Abel Anicet, kapitenin’ ny Barea. “Marary aho ary tratran’ny Covid-19, taorian’ny lalao nihaonan’ny kliobako Ludogorets Razgrad sy ny Tottenham (5 novambra 2020). Noho izany tsy afa-miainga aho amin’ny lalao mandroso”, hoy izy tamin’ny pejy Facebook-ny, omaly.
Mampanahy ihany koa anefa ny mety tsy hahatongavan-dRakotoharimalala Njiva Martin sy Ibrahim Amada, izay manana olana eo amin’ny fahafahana mivoaka ny firenena ilàn’izy ireo ravinahitra. “Mbola eo am-pandaminana izahay, amin’izao fotoana izao, ka ho fantatra eny ihany ny valin’izany”, hoy ny avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra.
Na dia hamonjy ny lalao mandroso aza i Nomenjanahary Lalaina na i Bôlida dia tsy azo heverina kosa ny hahatongavany eto Madagasikara amin’ny lalao miverina. “Efa ao anatin’ny fotoana tokony hahaterahan’ny vadiko izao ka mety tsy ho tonga any Toamasina aho amin’ny lalao miverina. Efa saika tsy handeha mihitsy aho amin’ireo lalao roa ireo fa ny andefimandriko no nampirisika ahy hiatrika ny lalao mandroso fotsiny”, hoy izy.
Tsy i Madagasikara irery anefa no misedra olana amin’ny ahiahy mety tsy fahatongavan’ireo mpilalaony. Mety hiteraka tsy fahafahan’ireo mpilalao any Italia ny fepetra noraisin’ny fitondrana any an-toerana, noho ny fiakaran’ny isan’ireo mararin’ny Covid-19 indray. Isan’ireo mpilalao mila ravinahitra any an-toerana ry Frank Kessié (Milan AC), Yao Kouassi Gervais na i Gervinho (Parmes), Jeremie Boga (Sassuolo), Christian Kouamé (Fiorentina) ary Jean Daniel Akpa (Lazio Rome). Manahy mafy ny amin’izany i Patrice Baumelle, mpanazatra ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, ankehitriny.
Baolina lavalava Manamafy ny fanafihana sy fiarovantena ny Makis vehivavy
Lalàn’ny etika sy deontolojia :: Mety ho tapaka tambin-karama ireo depiote tsy manaja fitsipika